7 bilood 1 toddobaad ka hor #1283 by taas
Waxaan cusubahay inaan isticmaalo rikoooo waxaan soo dejiyey diyaarado qaar. Dhibaatada aan heysto ma heli karo baaskiilada 2D iyo gawaarida GPS. Waxay u muuqataa inaanan haysan 2D oo aan la shaqeynayo PMDG Ma hubo haddii ay diyaar u tahay soo-saaraha. Dhamaan waxaan helayaa waa leydi madow iyo qaybo ka mid ah qaybaha qaar oo aad u weyn. Ku soo dhawow caawimaad. Su'aasha kale ee aan leeyahay waa inaan sameeyaa xakameyga ilaa FSUIPC?
7 bilood 1 toddobaad ka hor #1284 by Gh0stRider203
Waxaan haystaa PMDG 747-400, 737-6 / 7 / 800 iyo 777-2 / 300 iyo midka kaliya ee leh qalabka 2D, waa 737.